Jesoa Zanak’Andriamanitra : Mofon’ny fiainana, vatsin’ankohonana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ALAHADY FANKALAZANA NY SAKRAMENTA MASINA
Det. 8, 2-3. 14b-16a ; 1 Kor. 10, 16-17; Jn. 6, 51-59
« Jesoa Zanak’Andriamanitra : Mofon’ny fiainana, vatsin’ankohonana »
Nandinika ny misterin’Andriamanitra Trinite Masina isika tamin’ny alahady lasa teo. Mandinika ny misterin’i Kristy ao amin’ny Sakramenta Masina kosa amin’ity alahady ity. Hibanjina ny Olona faharoa ao amin’ny Trinite Masina. Io Olona faharoa ao amin’ny Trinite Masina io no tonga nofo sy nidina tety an-tany ary niara-nonina tamin’ny olombelona. Mampahatsiahy ilay mana nirotsaka avy any an-danitra, sakafon’ny vahaoka Israely tany an-taniefitra i Jesoa, amin’ny evanjely androany, tamin’ny nilazany hoe : « Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra » (Jn. 6, 51). Izy no mofon’ny fiainana, sakafo mahavelona, « vatsin’ankohonana » kristianina entiny mamakivaky ny sedram-piainana.
« Namahana anao tamin’ny mana, izay tsy fantatrao, na fantatry ny razanao [Izy], mba hampahalalàny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona, fa izay rehetra mivoaka avy amin’ny vavan’Andriamanitra… » (Det. 8, 3b). Tsiahivin’ny Vakiteny voalohany anio ny hafatrafatr’i Moizy tamin’ny vahoaka Israely fony izy ireo hiditra ny tany nampanantenaina. Namakivaky taniefitra nandritra ny efapolo taona ny vahoaka Israely. Nandeha lalan-tsarotra. Fandosirana no nialana tany Ejipta. Loza maro no natrehina teny an-dalana: bibilava mahamay, maingoka mahafaty, fa indrindra indrindra ny hetaheta sy hanoanana. Teo amin’izy ireo lalandava anefa ny tanan’ny Tompo. Nanafaka azy ireo tamin’ny kaikitry ny bibilava sy ny maingoka, nanome rano niboiboika avy tamin’ny vatolampy tena mafy; nampidina mana, sakafo mahagaga, hohanin’izy ireo. Tandindona ihany anefa izany rehetra izany fa i Jesoa Kristy, Ilay nidina avy any an-danitra, no tena famonjena. Izy no Rano miboiboika, Izy no tena Mofo mahavelona.
« Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra » [Jn. 6, 51 ; Vakiteny fahatelo, ny evanjely]. Nahalala tsara ny tantaran’ny mana ireo vahoaka nihaino an’i Jesoa. Tadidin’izy ireo ilay mofo nidina avy any an-danitra nohanin’ny razany tany an-taniefitra. Tafintohina izy ireo mandre ny fanambaran’i Jesoa fa « mofo nidina avy any an-danitra » ihany koa Izy. Ahoana no maha mofo Azy ? Ny tenany, ny vatany lazainy fa fihinana. Ny ràn’ny tenany no lazainy fa fisotro… « Hataon’ilay io ahoana àry no fanome antsika ny nofony hohanina ? » (Jn. 6, 53). Fa vao mainka nohamafisin’i Jesoa ny fanambarany fa « tena fihinana ny nofony ary tena fisotro ny rany » (Jn. 6, 56). Tsy hain’ny saina hazavaina ny hoe « zavatra fihinana » ny vatan’ny Tompo, sakafo mahavelona ny nofony. Tsy hain’ny saina takarina ny hoe « zava-pisotro » ny ran’i Jesoa. Vao mainka tsy hain’ny saina hazavaina ihany koa ny mihevitra ny mofo-hostia sy ny divay ampiasaina amin’ny Lamesa ankehitriny, ho Vatana aman-dRan’i Kristy. Ny finoana ny asan’Andriamanitra Ray eo anivon’izao tontolo izao sy ny finoana ny tenin’i Jesoa Kristy no hany lalana tokana ahazoana izany.
« Moa ny kalisim-pisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin’ny Ran’i Kristy va ? Ary moa ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin’ny Tenan’i Kristy va ? ». Fanontaniana mitaky valiny « eny » no entin’i Md Paoly [vakiteny faharoa] milaza ny hevitra lalina fonosin’ny Eokaristia : Eny, ny Eokaristia dia firaisana (komonio) amin’ny Vatana sy ny Ran’i Kristy. Miforona ho tena/vatana iray ao amin’i Kristy ireo rehetra manao komonio. Sady miombona amin’i Jesoa Kristy izay mandray komonio no miombona ihany koa amin’ny mpiray Fiangonana aminy, mandray ny Vatan’i Kristy. Miforona ho vatana iray ao amin’i Kristy ny Fiangonana mino sy mivelona amin’ny Eokaristia. Mirafitra ho iray tsy mivaky ny kristianina manao ny « komonio am-panahy » ankehitriny, eo am-piandrasana ilay fotoana handraisana ny komonio ara-tSakramenta.
« Miankohofa mba hitsaoka ity Mistery lehibe ! … Ny Finoana anie hameno izay tsy mety ho azontsika…» [Tononkira fitsaohana ny Sakramenta Masina]